Otu esi etinye Flask na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
July 5, 2021 June 11, 2021 by Jọshụa James
Wụnye PIP Maka Python3
Wụnye Virtual Environment
Mepụta gburugburu ebe obibi
Flask bụ usoro webụ mepere emepe ejiri asụsụ mmemme Python rụọ. Akụrụngwa bụ ọkụ, usoro ngwa ngwa nke pere mpe anaghị agụnye ORM, nkwado ụdị na libs ndị ọzọ. Igwe ọkụ na-eji naanị ngwaọrụ ndị dị mkpa iji mepụta ngwa webụ gị ma debe ha ma e jiri ya tụnyere Django, ngwanrọ mmepe webụ ọzọ ama ama. Flask dabere na ngwá ọrụ na ojiji Jinja2 dị ka engine template.
Enwere ike ime ntinye nke Flask n'ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ịwụnye sọftụwia sitere na njikwa ngwugwu “apt” gọọmentị Ubuntu, nke kachasị mfe; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị mmadụ ga-akwado ịwụnye Flask na gburugburu ebe obibi.
Ntuziaka anyị ga-enyocha otu esi etinye flask software na Ubuntu 20.04 LTS.
Nke mbụ, jide n'aka na usoro Ubuntu gị dị ọhụrụ. Ị ga-achọ ịnweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ ohere sudo maka ịwụnye.
Ọzọ, lelee ka ị hụ ma etinyere Python3.
Ọ bụrụ Python3 na-efu, jiri iwu a wụnye ya.
Ị ga-achọ ịwụnye PIP maka Python, nke na-enyere gị aka ịmepụta gburugburu mebere. Dị ka ekwuru na mmalite nke ntuziaka anyị, ị ga-etinye Flask na-emekarị na gburugburu ebe obibi.
sudo apt install build-essential python3-pip libffi-dev python3-dev python3-setuptools libssl-dev -y
Ugbu a, ị nwere ike ịwụnye gburugburu mebere nke ga-anọrọ ma na-agba Flask. Ị na-eme nke a na-esonụ.
Ozugbo arụnyere mebere gburugburu, mepụta flask direct wee mepee ndekọ ahapụtara.
mkdir flask_location && cd flask_location
Na ndekọ ndekọ, ị chọrọ ugbu a na-agba ọsọ iwu ka ịmepụta mebere gburugburu dị ka ndị a.
Ugbu a, rụọ ọrụ mebere gburugburu.
Ị ga-achọpụta ahịrị iwu ọnụ, nke nwere "venv" ugbu a iji gosi na ị na-arụ ọrụ ugbu a na gburugburu ebe obibi nke emepụtara.
Oge ikpeazụ ugbu a bụ ịwụnye sọftụwia Flask n'ezie na mpaghara mebere gị. Ị na-eme nke a na Pip3, nke ga-etinye ihe niile dị mkpa maka Flask, dị ka Jinja2, Werkzeug WSG web ngwa ọba akwụkwọ na modul ya.
Ugbu a, kwado ụdị Flask ka ị hụ na emechara nke ọma.
Ekele, ị tinyela Flask nke ọma na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị.
Ntuziaka ahụ egosila gị otu esi edozi ebe obibi Python mebere ma wụnye Flask. Maka ndị mmepe chọrọ akwụkwọ, ndị Akwụkwọ flask bụ mmalite kacha mma ileta iji mụta ka esi emepụta, tinye ngwa Python gị site na iji Flask.